2020 ity hoy ny profesora Assoumacou, ministry ny fampianarana ambaratonga ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa omaly. Diso be loatra mantsy raha araka ny nambarany ny tsaho miely mikasika izany eto amintsika, antony hanatanterahany fivoriana in-droa isan-kerinandro miaraka amin’ireo tompon’andraikitra isan-tsokajiny. Tafiditra ao anatin’izany ny Ministeran’ny fanabeazam-pirenena izay misahana ny sekoly ambaratonga fototra sy ny sekoly ambaratonga faharoa ihany koa. Nambarany ary fa miankina amin’ny fifehezantsika ny tsimok’aretina coronavirus no hahafahana mamerina amin’ny laoniny ny fampianarana Mety hisy ny fanemorana izany raha araka ny fanazavany izay holazaina mian-dalana eny ihany. Raha tsiahivina moa dia ka tokony amin’ny 17 ka hatramin’ny 21 Aogositra ho avy izao no fotoana hanatanterahana ny fanadinana bakalorea ankapobeny manerana ny Nosy raha ny 24 ka hatramin’ny 27 Aogositra kosa ny andiany faharoa amin’ny baka teknika.